RAHARAHA « EDDY BOIS DE ROSE » : Nohafahana ireo mpiasan’ny fahasalamana roa, nidoboka eny Antanimora ireo mpiandry fonja telo – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 7:32
Sazy mihatra roa taona no azon'i Eddy Bois de Rose.
Accueil/Politika/RAHARAHA « EDDY BOIS DE ROSE » : Nohafahana ireo mpiasan’ny fahasalamana roa, nidoboka eny Antanimora ireo mpiandry fonja telo
Naharitra roa andro ny fakana ambavany sy ny famotorana natao an’ireo olona voasaringotra tamin’ny raharaha fikasana fampandosirana an’i Eddy Maminirina, fantatry ny maro amin’ny anarana hoe Eddy Bois de Rose. Tafiditra tao anatin’izany ny Profesora Auberlin Rakototiana sy ny Dr Jean Marie Rakotosamimanana, izay samy nohafahan’ny Fitsarana noho ny fisalasalana. Sazy mihatra herintaona kosa no azon’ireo mpiandry fonja miisa telo izay tafiditra tamin’izao raharaha izao.
Lucien R. il y a 5 jours
Nivoaka omaly tolakandro rehefa nandrasana nandritra ny ora maro ny valin’ny fanadihadiana sy ny fitsarana tao anatin’ilay raharaha fikasana fampandosirana an’i Eddy Bois de Rose, izay notsaboina tetsy amin’ny Hopitaly HJRA Ampefiloha. Voasaringotra tamin’izany ny mpiasan’ny fahasalamana miisa roa, ahitana ny Profesora Auberlin Rakototiana sy ny Dokotera Jean Marie Rakotosamimanana, izay nahiana ho niray tsikombakomba tao anatin’ny raharaha. Rehefa vita ny fanadihadiana sy ny famotorana omaly dia fantatra fa nohafahan’ny Fitsarana noho ny fisalasalana ireo mpiasan’ny fahasalamana miisa roa ireo. Tetsy ankilany, herintaona sazy mihatra no azon’ireo mpiandry fonja miisa 3 sy olon-tsotra miisa 2 izay Vehivavy ny anakiray, ary samy nalefa eny Antanimora avokoa. Ankoatra ireo, 2 taona sazy mihatra no azon’i Eddy bois de rose noho ny fikasana hitsoaka teny amin’ny hopitaly, izay nalefa eny Tsiafahy. Manoloana ity valim-pitsarana ity, fantatra fa nanao Fanohanana ny mpisolo vava an’i Eddy bois de rose.
Nahazo rariny ny fitakiana…
Raha tsiahivina, nilaza ny tale jeneralin’ny Fandraharahana ny fonja (DGAP) Ranaivo Andriamaroahina Tovonjanahary, omaly, fa tsy nitsoaka ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), araka ny naely, i Maminirina Eddy, fantatry ny maro amin’ny anarana hoe “Eddy Bois de Rose”. Notsindrian’ity tomponandraikitra ity fa tsy maintsy mpiandry fonja hatrany no miambina ireo voafonja mivoaka ety ivelan’ny fonja. Nifandimbidimby ireo mpiandry fonja niambina tetsy amin’ny hopitaly HJRA, izay nandeha tsiroaroa araka ny fanazavana. Misy fotoana ny eo anivon’ny fandraharahana ny fonja no manao fidinana ifotony eny an-toerana manara-maso ity voafonja ity, ary tsy mahita olana fa eo avokoa na ireo mpiambina, na i Eddy Bois de Rose. Nisy fotoana ihany koa anefa ny eo anivon’ny tribonaly nanao fitsirihana, ka tamin’izany no tsy nahitana an’ity voafonja ity tao amin’ny toerana tokony hisy azy, raha toa ka hita teo hatrany ireo mpiambina roa lahy. Teo no nisy filazana fa tafatsoaka izy. Notanana avy hatrany, noho izany, ireo mpiandry fonja. Teo ihany koa anefa no nantsoina i Eddy Bois de Rose ary tonga tao an-toerana ka dia notanana avy hatrany ihany koa. Niaraka nentina teny amin’ny Polisy avokoa, izy ireo, avy eo.
Antenaina, araka izany, fa hitsahatra niaraka tamin’ny fivoahan’ity didim-pitsarana ity ihany koa ny fitokonan’ireo mpiasan’ny fahasalamana izay tsy nandray marary afatsy ireo izay aretina mihatra aman’aina tsy maintsy vonjena hatramin’ny nipoahan’ity raharaha ity. Isan’ny notsindrian’izy ireo tamin’ny fitakiana nataon’izy ireo fa tsy andraikitry ny mpitsabo no miandry ny voafonja. Toa te hilaza izy ireo fa tsy tomponandraikitra amin’ny fandosiran’ny gadra iray izay mandalo tsaboina eo aminy izy ireo. Azo ambara ho nahazo rariny, araka izany, ity fitakiana ity, raha ny didim-pitsarana nivoaka omaly no asian-teny.
ADY AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO: Hametrahana orinasa mamokatra sakafo any Atsimon’ny Nosy
TOBY KOLONELY MOHAJY : Notanterahina ny famindram-pibaikoana ny Vondron-kery vonjitaitra
LALAON’NY NOSY 2023: Hampiantrano ny andiany faha-11 i Madagasikara
MIALY RAJOELINA – 08 MARSA 2021: “Asa mivaingana sy fanohanana ny vehivavy mavitrika no hasongadina”
FIFORONANA ANDRO RATSY: Tombanana hahakasika ny Faritra Sava sy Analanjirofo aorian’ny fetin’ny Noely